Ny ady sy ny fitantanana ratsy ary ny fiovaovan’ny toetr’andro ao Yemen no mahatonga ny tsy fahampian-drano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, македонски, Deutsch, Swahili, Türkçe, Português, Ελληνικά, 日本語, Nederlands, عربي, English
Pikantsary ahitana ankizivavy iray voahodidina siny tsy misy na inona na inona, nalaina tao amin'ny lahatsary avy amin'ny Positive Yemen .
Miatrika krizin-drano henjana i Yemen, sehatra iray amin'ireo krizy maha-olona manerantany ratsy indrindra: olona 16 tapitrisa no tsy afaka mahazo rano madio ao amin'ny firenena, araka ny voalazan'ny UNICEF.
“Inona no tena ratsy kokoa noho ny tsy fahazoana ny zo fototra maha-olombelona, rano?” hoy i Shoushou, tanora mpikatroka avy any Sana'a renivohitra, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Anisan'ireo tanàna 10 tsy ampy rano indrindra manerantany i Sana'a ary atahorana ho tratry ny maintany afaka taona vitsivitsy. Mampiasa rano 95 isanjato latsaka noho ny ampiasain'ny mponina any Etazonia ny Yemenita.
Tsy isalasalana fa nisy fiantraikany tamin'ny loharano ny telo taonan'ny ady satria nokendrena hatrany ireo siniben-drano sy fantson-drano. Tamin'ny volana febroary 2016, nisy tatitra nilaza fa nidaroka baomba sy nanimba siniben-drano izay namatsy rano fisotro ho an'ireo Yemenita 30.000 ireo fiaramanidina Saodiana. Nitranga fotoana fohy taorian'ny fanapoahana baomba ny orinasa goavana iray tao an-tanànan'i Mokha, izay voalaza koa fa nataon'ny fikambanana notarihan'ny Saodiana.
Na izany aza, manampy ihany koa amin'ny fanazavana ny fahasimban'ny toe-draharaha ny fitantanana ratsy. Efa ela ny governemanta Yemenita no nandroba ny rano ambanin'ny tany ary mety tsy hitaky ny paikady maharitra kokoa ny manampahefana nopho ny ady mihamafy.
“Manameloka ny governemanta aho noho ny tsy fitantanana sy ny tsy fanaraha-maso ny krizin-drano. Tsy raharahiana ny olona,” hoy i Shoushou tamin'ny Global Voices.
Na dia miha-ritra tanteraka aza ny rano ambanin'ny tany, toa miha-maina hatrany ny toetr'andro any Yemen. Tamin'ny taona 2009, naminavina ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO) fa i Yemen no firenena voalohany manerantany mety ho ritra tanteraka ny loharano ambanin'ny tany.
Efa lafobe ny vidin-drano ao amin'ny firenena, mandoa 30 isan-jato mahery amin'ny fidiram-bolan'izy ireo mba hanana rano ampidirina ao an-tranony fotsiny ny olom-pirenena tsotra. Sarany lafo indrindra manerantany.
Satria miha-lalina ny krizy, mandray ny loharano ho toy ny fitaovam-piadiana ireo mpiady. Nanakana hatrany ny fitsinjarana ireo fanampiana maha-olona toy ny sakafo sy rano na ny tafika tohanan'ny Houthi na ny tafika Saodiana, nahatonga ireo Yemenita ho tsy manan-tsafidy ankoatra ny mitahiry rano betsaka araka izao azo atao, izay matetika lasa maloto ny rano.
Fanamby goavana any Yemen koa ny fakàna rano. Anjaran'ny vehivavy sy ny tovovavy ny andraikitra amin'ny fanangonan-drano, rehefa lavitry ny fari-ponenan'ny olona ny loharano. Mahatonga azy ireo mety iharan'ny fanorisorenana ara-nofo ny dia lavabe amin'izany. Mety ho rendrika ao anaty siniben-drano tsy mihidy izy ireo na tratry ny fahafahan-jaza noho ny fitondrana siny mavesatra.
Tsy maintsy miverimberina ireo tovovavy tsy mahazaka siny mavesatra. Mety haharitra andro iray manontolo ny asa, ka mahatonga azy ireo tsy afa-mianatra .
Niteraka valanaretina kôlerà tao Yemen ny tsy fahampian'ny fitehirizan-drano, valanaretina izay hita fa mora miparitaka sy miely be indrindra. Satria olona ahiahiana voan'ny kôlerà maherin'ny 1,1 tapitrisa no voarakitra nanomboka tamin'ny Aprily 2017, ary 2 300 mahery no namoy ny ainy.
Yemenita iray ao anatin'ny 62 no ahiahiana ho voan'ny kôlera. Maro amin'izy ireo no ankizy latsaky ny fito taona. Voalaza fa mandray olona ahiahiana 60 hatramin'ny 70 isan'andro eo ny hôpitaly.
Mampitandrina ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba ny Fahasalamana fa mety hitranga ny andiany faha-telo amin'ny kôlera taorian'ny andiany roa lehibe tato anatin'ny taona vitsy.
Soa fa tsotra ihany ny mitsabo ny kôlera, matetika ampy hanasitranana ny tranga ratsy indrindra ny fihinanana antibiôtika sy ranon-javatra atsofoka amin'ny lalan-drà. Saingy tsy maintsy atao ara-potoana haingana aorian'ny soritr'aretina, raha tsy izany mety hahafaty.
Miteraka fanamby amin'ny fitsaboana ny fandehanana any amin'ny toeram-pitsaboana: tamin'ny taona 2017, olona teo amin'ny 17 tapitrisa teo no tsy nahazo tolotra ara-pitsaboana fototra tao Yémen. Amin'izao fotoana izao, dia 45% monja amin'ireo toeram-pitsaboana ao amin'ny firenena no miasa.
Na dia eo aza ny ezaka amin'ny programa iraisampirenena momba ny zon'olombelona tahaka ny ataon'ny UNICEF sy ny OMS, mahatonga ireo Yemenita maro tsy mahazo fitsaboana ity tsy fahampiana toeram-pitsaboana ity. Tsy vitany hoe namono Yemenita am-polony mahery ny daroka an'habakabaka tamin'ny volana Aogositra 2018 fa koa nanimba ny Hôpitaly Al Thawra tao Hudaydah.
Fampiononana hatrany ho an'ny olona ao #Yemen noho ny fanafihana tao amin'ny hôpitaly Al-Thawra ao #Hudaydah, ny tombatombana voalohany dia 14 no namoy ny ainy ary 30 naratra (mety mbola hiakatra ireo isa ireo arakaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha).
Mandray olona marary eo amin'ny 50 000 eo ho eo ny hôpitaly isam-bolana ary foibe ho an'ny fitsaboana ny kolera. Taorian'ny fanafihana, niakatra efa ho ampahatelony ny tranga kôlera tao Hodeidah.
Ny tetikasa #سقيا_1000‬ dia mikendry ny hanome rano maimaim-poana ho an'ireo izay tena mila izany indrindra. Natomboka ny volana Novambra 2017, mikendry ny hameno sinin-drano 1000 ao an-drenivohitra Sana'a sy ny manodidina azy izany. Nahatratra ny tanjony izy ireo tamin'ny Febroary 2018. Manome tombontsoa ho an'ny fianakaviana 6194 na olona 39 789 ny tetikasa ankehitriny.
Nametraka fitehirizan-drano vaovao sy manome fanadiovana sy fikolokoloana matetika amin'ireo siny vaovao sy efa misy ihany koa ireo mpikatroka. Hatramin'izao dia efa nametraka siny vaovao 14 izy ireo, ary nameno 74 sy nanampy ny fitazonana ireo siny 21 efa misy. Mifototra amin'ny fanomezana avy amin'ny olona any Yemen sy any ivelany ny tetikasa manontolo. Izay ihany no hany loharanom-bolan'izy ireo.
Omar Mohamad, mpikatroka Yemenita nandray anjara tamin'ny tetikasa, nilaza tamin'ny Global Voices hoe:
Nanomboka tao amin'ny media sosialy ilay tetikasa. Nahazo ny fanohanan'ny olona avy ao anatiny sy ivelan'i Yemen izahay. Ny fanohanan'izy ireo no antony voalohany nahombiazanay. Tsy nahazo fanohanana avy amin'ny antoko politika velively izahay. Alhamdulillah, tonga tamin'ny tanjonay izahay ny volana febroary 2018. Taorian'izany dia nivadika ho tetikasa izay miantoka ny famenoana hatrany ny siniben-drano ny hetsika. Tamin'ny tapany voalohany tamin'ity taona ity, dia niasa tsara ny tetikasa ary araka ny drafitra. Saingy vao haingana dia nisy ny tsy fahampian'ny fanohanana, ary mitombo isan'andro ny tsy fahampiana. Noho izany dia mitady loharano hafa avy amin'ny mpivarotra na mpanome fanampiana izahay mba hanohanana ny tetikasa.